Izingosi zezingxoxo zevidiyo ze-Tinychat
Ngakho-ke ake siqhathanise ukuthi iyiphi ingxoxo yevidiyo yamahhala ezonikeza imizwa eyengeziwe kubabukeli, i-Flirtymania noma i-Tinychat!
Phequlula ezingosini zezingxoxo zevidiyo zamahhala ukuze uhlangane nabangane abasha noma uzenzele eyakho ingosi yezingxoxo.
Ngeke ube nesithukuthezi ngengxoxo yevidiyo ye-Flirtymania, ngoba, ngokungafani ne-Tinychat, lena indawo efanelekile yalabo abathanda ukugwema isizungu nesithukuthezi empilweni.
Izingosi zokuxoxa zevidiyo ezisheshayo
Ingabe ufuna ukuxoxa ngevidiyo namantombazane amahle? Enye indlela yokwenza lokho iwukuvakashela noma iyiphi yezingxoxo ezingamakhulu ku-Flirtymania. Izingxenyekazi ezifana ne-Tinychat azikwazi ukwenza lokho ngaphandle kobunzima bokubhalisa.
Ingxoxo ye-cam ebukhoma
I- Flirtymania iyingxoxo ye-cam yamahhala ebukhoma, evumela abasebenzisi ukuthi bahlole okuqukethwe ngaphandle kokubhalisa. Ababukeli akudingeki bavule ikhamera yabo yewebhu uma bengafuni.
Ngokungafani ne-Tinychat, i-Flirtymania akuyona nje ingxoxo yevidiyo yamahhala, kodwa inethiwekhi yokuxhumana nabantu lapho ungathumela khona izithombe namavidiyo, ubhale izindatshana futhi ube nezingxoxo ezisebenzayo kumazwana. Umphakathi onobungane uyasebenza futhi uzohlala unokuthile okwenzayo. Umuzwa wokusekela okwenza le nkundla ikhetheke.
Ukuxhumana okusheshayo nabantu ongabazi abavela noma kuphi emhlabeni. Ngokungafani ne-Tinychat, i-Flirtymania iwuhlelo lokusebenza lapho ungaxoxa khona ngevidiyo nabantu ongabazi kukhompuyutha yakho kanye neselula. Thumela imilayezo yombhalo kuwo wonke amantombazane aku-inthanethi futhi unqume ukuthi iyiphi kubo ehlela ucingo oluyimfihlo. I-Flirtymania akaziwa nhlobo, amantombazane oxoxa nawo awakwazi ukukubona ukuthi ungubani. Lahla ihlazo eceleni!
Izinkundla zokuxoxa zamahhala
Qala ukuxoxa namantombazane engxoxweni yasesidlangalaleni, futhi uxoxe ngasese kuphela nalabo obathandayo ngempela. Nguwe kuphela onqumayo ukuthi iyiphi ifomethi yokuxhumana ongayikhetha nokuthi uvule kuliphi iphuzu ikhamera. Futhi uma kukhona okungahambanga kahle, awudingi ukubeka izaba, mane uxhume ekusakazweni kwenye intombazane. Esikhundleni sokukhuluma nabantu ongabazi nhlobo, i-Flirtymania ikunikeza ithuba lokukhuluma nabantu obathandayo.
Phakathi kwezinye izinto, i- Flirtymania ingcono kune-Tinychat ekuzuzeni amathuba.Izindlela eziningi zokwenza imali endaweni yesikhulumi ezingahlobene nokuqukethwe okuvusa inkanuko.